फेसनले मात्र आकर्षक बनिदैन : एलिना गौतम - Himalayan Kangaroo
फेसनले मात्र आकर्षक बनिदैन : एलिना गौतम
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ मंसिर २०७२, बुधबार १७:३३ |
मेलबर्न । काठमाडौं स्युचाटारकी स्थायीवासिन्दा हुन् एलिना गौतम । हाल मेलबर्नमै अध्ययन गर्दै आएकी एलिना आकर्षक देखिन भन्दा पनि व्यक्तित्व बढाउँने फेसन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छिन् । प्रस्तुत छ उनै सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्वकी धनी एलिनाको फेसन सम्बन्धी केही विचार र धारणा :
फेसन भनेको हामीले लगाउँने लुगा,जुत्ता र गर गहना हो । त्यसमा अलिकति स्टाइल थप्न सक्यो भने स्टाइलिस देख्न सकिन्छ । यसले हामीलाई आकर्षक बनाउँनुको साथै व्यक्तित्व समेत बढाइदिन्छ । हामी सबैलाई राम्रो र आकर्षक देखिन मन लाग्छ । त्यसैले नै हो फेसन ट्रेण्डलाई अपनाउँनुपरेको ।
म आफूलाई फेसनप्रति सजग रहेको युवती नै मान्छु । तर म त्यस्तो फेसन मात्र रुचाउँछु जसले मलाई आकर्षक बनाउँनुको साथै कम्फोर्टेवल फिल गराउँछ ।
सबैको आ आफ्नो बुझाइ र हेराइ हुन्छ । मेरो विचारमा चाहिं सबैभन्दा पहिले सुन्दर हुनु नै आवश्यक छ । किनभने फेसन भनेको हामीले ठाउँ र मौसम अनुसार फेरिरहन्छौं । तर सौन्दर्य सधैं एकनाशको रहिरहन्छ । केहीलाई लाग्दो हो फेसनलाई हामीलाई राम्रो र आकर्षक बनाइदिन्छ तर त्यसका लागि पनि सुन्दर हुनु आवश्यक छ ।
तपाईले आफ्नो सुन्दरता र फेशन लिएर सबैभन्दा राम्रो कम्प्लिमेन्टस् कहिले पाउँनुभएको थियो ? तपाईलाई सम्झना छ ?
मलाई त्यस्तो खासै अनुभव छैन । तर एकपटक हाइ स्कूलमा पढ्नेबेला मेरो एकजना साथीले मलाई मेरो हेयर स्टाइल चेञ्ज गर्ने सल्लाह दिएको थियो ।
म अरुको त भन्न सक्दिनँ तर म चाहिं ऐना विनाको जीवन नै कल्पना गर्न सक्दिनँ । आफू कस्तो देखिन्छु भनेर हामीले हेर्ने नै ऐनामा हो । त्यसैले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
यो मौसममा भरपर्ने कुरा हो । साधारणतय सबै मौसमलाई हुने भएकोले म पाइन्ट र टीसर्ट नै बढी लगाउँन रुचाउँछु ।
फेसनले आकर्षण गर्ने होइन,व्यक्तित्वले हो । तर हामी जे लगाउँछौं,त्यसमा आत्मसन्तुष्ट हुन भने जरुरी छ । किनभने हामी आफूले लगाएको फेशनबाट सन्तुष्ट छौं भने त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाइदिन्छ । र,त्यो आत्मविश्वासले अरुलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
म कस्मेटिक सामाग्री बढी प्रयोग गर्न रुचाउँदिनँ । मेरो विचारमा हाम्रो सोंच नै राम्रो हुनुपर्छ । त्यो सकरात्मक सोंच मुस्कान बनेर हाम्रो मुहारबाट,आँखाबाट अभिव्यक्त भैदिन्छ । त्यसले हामीलाई अझ सुन्दर बनाइदिन्छ । त्यसैले सधैं खुशी रहनु नै मेरो सौन्दर्यको राज हो ।
म त्यति शपिङ गर्न रुचाउँदिनँ । आवश्यक परेकै सामान मात्र म किन्न रुचाउँछु । तर मैले त्यति रकम शपिङ गरेरै खर्च गर्नुपर्यो भने सबैभन्दा पहिले त म केही गहनाहरु किन्छु अनि केही लुगाहरु पनि । तर मैले शपिङ नगरी त्यो पैसा अन्य कतै खर्च गर्न पाउँछु भने म मेरो पढाइका लागि खर्च गर्छु ।
Previousनयाँ संविधान मानव अधिकारमैत्री छ : राष्ट्रपति भण्डारी
Nextमधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने
२८ श्रावण २०७१, बुधबार १४:५५
सुन्दर ओठको लागि लिपिस्टिक लगाउने पाँच तरिका
६ कार्तिक २०७५, मंगलवार १०:०२